Dense fog inonotsa ndege dzinopfuura zana panhandare dzendege dzeMoscow
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Dense fog inonotsa ndege dzinopfuura zana panhandare dzendege dzeMoscow
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Dense fog inonotsa ndege dzinopfuura zana panhandare dzendege dzeMoscow.
Mangwanani, Russia's Federal Air Transport Service yakashuma kuti ndege dzinopfuura makumi matatu dzakaendeswa kune dzimwe nzvimbo dzendege muMoscow husiku hwapfuura.
Mhute huru inovhiringa ndege kubva kuMoscow Sheremetyevo, Domodedovo neVnukovo airport.
Ndege dzinopfuura zana dzakamiswa panhandare huru dzendege muMoscow nemhute yakakora nhasi.
Nhandare dzendege dzakaratidza kuderera kwekuonekwa sechikonzero chekunonoka kwendege nekukanzurwa.
Ndege dzinopfuura zana dzakadzimwa kana kunonoka panhandare huru dzendege dzeMoscow nekuda kwemhute inorema.
Sheremetyevo, Domodedovo uye nhandare dzendege dzeVnukovo dzakazivisa kunonoka kwendege nekukanzurwa masikati, nekuda kwemhute yakaoma yakafukidza guta guru reRussia.
In Sheremetyevo, ndege dzinopfuura makumi matatu dzakanonoka (kusvika 30:11 nguva yeMoscow), muDomodedovo - kupfuura ndege dze50 (kusvika 25:12 nguva yeMoscow), muVnukovo - kusvika ku15 ndege (kusvika 47:12 nguva yeMoscow) . Zvakataurwawo kuti dzinenge ndege dze10 dzakadzoserwa kune imwe nhandare yendege, kusanganisira kuDomodedovo.
"Musi waNovember 2 (kusvika 12:10 nguva yeMoscow) ndege dze47 dzakanonoka (kweawa inopfuura awa) muVnukovo nekuda kwekuderera kwemamiriro ezvinhu," nhandare yendege yakati.
"Kubva 00:00 kusvika 12:15 nhandare yendege yakashanda nendege dzinosvika zana nemakumi maviri kune vanosvika nekusimuka. 120 ndege dzakaendeswa kune Domodedovo kubva kune dzimwe nhandare dzendege dzeMoscow air hub, ndege makumi maviri nenhatu dzakaenda kune dzimwe nzvimbo dzendege, "basa renhau reDomodedovo rakashuma.
Mangwanani, Federal Air Transport Service yakataura kuti ndege dzinopfuura makumi matatu dzakaendeswa kune dzimwe nzvimbo dzendege muMoscow husiku hwapfuura.
Pausiku hwaNovember 1-2, mhute yakasviba yakafukidza Moscow. Sekureva kweHydrometeorological Center yeRussia, mhute iri muguta guru ndeyechisikigo uye yakasimuka semhedzisiro yekutonhora kwemhepo. Inotarisirwa kupararira na2:00 masikati muMoscow uye na3:00 masikati munharaunda yeMoscow.